ယုတ်မာချက်က ကမ်းကုန် တယ်…ချိန်းတွေ့နေသော စုံတွဲ ကို သူ့ရှေ့ မှာတင် အတင်းအဓမ္မ ဆက်ဆံခိုင်းပြီး… – Let Pan Daily
” ဝ ” မှာ လုပ်သလို သေဒဏ်သာ တစ်ကယ် ပေးကြည့်….ခုလိုလုပ် ရဲကြဦးမလား
“ချိန်းတွေ့နေသော စုံတွဲ ကို သူ့ရှေ့မှာတင် အတင်း အဓမ္မ ဆက်ဆံ ခိုင်းပြီး ဓားနဲ့ ခုတ်သတ်ကာ ဖုန်းလု သူကို ဖမ်းမိ”
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက် ဟူးမွန်ဆည်နှင့် ကောက်ကွေ့ဆည်ကြား ရေချောင်းအနီး လူငယ်တစ်ဦး ဓါးခုတ်ခံရခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၃)နာရီိခန့်တွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်ကြား သိရသည်နှင့် လားရှိုးနယ်မြေ ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဇော်လှိုင်ထွန်းနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်အခင်းဖြစ်ရာနေရာသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မောင်ထူးကိုကို(ခ)နီကိုဗစ် အသက်(၁၈)နှစ်သည် လားရှိုးမြို့ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်နေသူ မ…. နှင့်အတူ တွေ့ရှိရပြီး….
မောင်ထူးကိုကို၏ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ တွင် (၄)လက်မခန့်ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိကာ စိုးရိမ်ရသဖြင့် လူမှုကူညီရေး အသင်းကားနှင့်အတူ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပြီး ညနေ(၄)နာရီခန့်တွင်ထူးကိုကိုမှာ ဒဏ်ရာဖြင့်လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် သေဆုံး သွားခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများသည် အမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်၍ တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ဆက်လက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ကြရာ ယခင်ကလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်များကျူးလွန်ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အောင်ညွှန့်(ခ)အိုက်စိုင်း အသက်(၄၂)နှစ် ကျဘမ်း ၊ရပ်ကွက်(၇)နယ်မြေ(၁၆)အား ၄င်းနေထိုင်ရာနေအိမ်မှ လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်ကာ စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မင်္သကာဖွယ်ရာအောင်ညွှန့်အား စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ မှ ၄င်းကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
တရားခံ အောင်ညွှန့်သည် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားသည့်နေ့ရက်တွင်သေဆုံးသူ ထူးကိုကိုနှင့် မ…… တို့အား ၄င်း၏ရှေ့မှောက် တွင် ကာမစပ်ယှက် ခိုင်းပြီး ဓါးမဖြင့်ထူးကိုကို အားခုတ်ကာ ၄င်းတို့ကိုင်ဆောင်ကြသော တယ်လီဖုန်း ဟမ်းဆက်(၂)လုံးအား ယူဆောင်ကာ ….
ဆင်းကဒ်များအား ဟူးမွန်ဆည် အတွင်းလွင့်ပစ် ခဲ့ပြီးနောက် ဖုန်း(၂)လုံးအား ၄င်း၏နေအိမ်အနောက်ဘက် ထရံကြားတွင်သိုဝှက်သိမ်းဆည်းထားကြောင်း ထွက်ဆိုသဖြင့် သက်သေခံပစ္စည်းများအား လိုက်လံသိမ်းဆည်း ခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်။
အောင်ညွှန့်(ခ)အိုက်စိုင်း၏ နေအိမ်တွင် လက်ကိုင်ဖုန်း(၂)လုံးနှင့်အတူ ထရံတွင်ထိုးလျှက်တွေ့ရှိရသည့် အရိုးအသွား(၁)ပေ (၈)လက်မ ၊ ဗျက်(၂)လက်မခန့်ရှိ ၀ါးရိုးတပ် သက်သေခံဓါးမ(၁)ချောင်း၊သစ်သားလေးဂွ(၁)လက်၊ဖန်ဂေါ်လီ(၄၀)လုံး အားစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ….
သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် ရှာဖွေပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းကာ အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြစ်မှု့ကျူးလွန်သူ တရားခံ အောင်ညွှန့်(ခ)အိုက်စိုင်းအား လားရှိုး နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဇော်လှိုင်ထွန်းမှ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ(၁၈)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၃)နာရီခွဲတွင် (ပ)၅၀/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ -၃၀၂/၃၉၄ ဖြင့် အမှု့ဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်း- သိန်းမင်းထွန်း(လားရှိုး)/Lashio News Agency ဓါတ်ပုံ – လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်း
မွနျမာပွညျ အနနေဲ့ ကိုဗဈဆူနာမီ လှိုငျးလုံးကွီးကို ရငျဆိုငျနရေပွီ ဟု ပညာရှငျမြား ပွောကွား
လူပွောမြား နတေဲ့ ကိုးတနျး ကြောငျး သူ မိနျးကလေး (၅) ယောကျ ဖွဈရပျ
ကုန်စိမ်းရောင်း တဲ့ အမေမုဆိုးမကြီး ကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ရင်း (၄)ဘာသာဂုဏ်ထူး နဲ့ အောင်ခဲ့တဲ့ ညီလေး